Myanmar Express ကို တည်ထောင်သူ၏ လိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပတ် သိရပြီ | Democratic Wave
Posted by Demo Wave , at 12:59 PM 39 comments
ဖြစ်ကြောင်း http://www.who/myanmarexpress.net/ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သိပ်လဲ ရွှီးမနေပါနဲ့.. ဟဲဟဲ လို့ပဲ ရီလိုက်တော့မယ်...
NLD IT က ပြောထားတဲ့ လင့်ထဲက အတိုင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ နီးနီလေးဗျ
အော်...အပျင်းပြေ ဟာသထက်တောင် ..ကောင်းပါသေးတယ်ကွာ...
Got Help from CIA?
ဟားဟား ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကွာ NLD ကလူတွေတကယ်အစွမ်းစရှိလို့ကတော့ MEG ဆိုတာခုချိန်ရှိတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး..ယုံအောင်လဲဖေါကြပါ
အမေရိကန် ကတဲ့လား အမေစုမကောင်းကြောင်းဖော်ပြထားလို့ သွားဖတ်လိုက်မိပါတယ် နောက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးမိပါတယ် ဦးကျော်ဆန်းလက်သတ်မွေးထားတဲ့ ကောင်းတွေပဲဆိုပြီးထင်နေတာ အခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့...
အရင်တုန်းက အမေစုလွတ်အောင် ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေက
ဒီချုပ် အိုင်တီသမားများ ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပေးပါ
နဲနဲ ဝင်ပြောမယ် ...
Whois နဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ လိပ်စာက လိပ်စာအစစ်မဟုတ်ပါ .. Privacy Protect လုပ်ပေးတဲ့ Company လိပ်စာကြီးပါ ...
Myanmar Express ကို Down စေချင်ရင်တော့ ..
မှာ သွားပြီး Report လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ...
NLD Supporter said...
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီ post လေးကို အမြန်ဆုံး ပြန်ဖြုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့က NLD ကို တစ်ခြားမလိုလားတဲ့ ၊ တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့ လူတစ်ချို့ က ပျက်ရယ်ပြုဟားတိုက်နေမှာကို မလိုလားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
IP trace လုပ်ရုံနဲ့ နေရပ်လိပ်စာအတိအကျ အပြည့်အစုံ ၊ ဖုန်းနံပါတ် စတာတွေကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာဟာ IT သမားတွေအတွက်တော့ အင်မတန်မှ ပြောင်မြောက်တဲ့ဟာသတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ IP ကို Tracing websites တွေက ကြည့်ရင်တစ်မျိုး ၊ Command prompt ကနေကြည့်ရင် တစ်မျိုးပေါ်ပါတယ်။ တော်တော်များများ IP address ကို trace လုပ်ကြည့်ရင် USA နဲ့ Canada ပဲအများဆုံးပြပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ Server တွေက အဲဒီတွေမှာ ထိုင်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Express ကိုဘယ်သူလုပ်သလဲဆိုတာ ကျွှန်တော် personal approach နဲ့ စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါသိပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်စုတစ်စုကပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးအတိအကျမပြောနိုင်သေးတဲ့အတွက် မပြောပါဘူး။
ဒိုမိန်းလိပ်စာပါ ကျနော်တို့ ဒိုမိန်းဝယ်ရင် Privet လုပ်ပေးလိုက်တာနှင့် ဒိုမိန်းလုပ်ငန်းလိပ်စာ ၀န်ဆောင်မှု ပေးထားပါတယ်။ အကယ်လို့ အဲဒီ စာမျက်နှာကို ဖျက်သိမ်းစေချင်ရင် Report လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အပေါ်ကတယောက်ပြောထားသလို ဒီပိုစ့်ကို ဖျက်လိုက်ပါ။ သိက္ခာကျပါတယ် မလိုလားသူတွေက လှောင်ပြောင်ခြင်း ခံရလိမ့်မယ်။ ဒိုမိန်းလိပ်စာသိတိုင်း တရားခံမိပြီပြောရင် WikiLeaks' Assange နာမည်မကြီးခင်ထဲက အမေရိကန် သတ်လို့ သေတာကြာပြီ။
ဒီ ပို့ စ်ကိုေ၇း သော မြန် မာလို မေ၇း ဘဲ သတ္တိ ၇ှိ ၇င် အ င်္ဂလိပ် လိုေ၇း ပြီးတစ် က မ္ဘာ လုံး ကို ဖြန့်  ပါ လား ။ မင်းမ ဟုတ် တာေ၇း ထား ကြောင်းထင် ၇ှား ၇င် တ ၇ား စွဲ ခံ ၇ ဖို့ ပြင် ထား ပါ ။
who's stupid like that?::
funny... funny NLD IT,,, he',he',he',e',e',e',
အစိုးရဘက်တော်သားတွေကို ဝေဖန်တာကျတော့ အမှန်တရားတဲ့..ဒေါ်စုနဲ့NLDကို ဝေဖန်တာကျတော့ အပုပ်လေလွင့်တဲ့..တော်တော်လေး တတ်နိုင်ကျတဲ့ ဒီမိုတွေ . ဒီမိုကောင်တွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ဒီprogram ပဲ ရေးထားတယ် ..(အမြဲမှန်တဲ့ NLD အမြဲမမှားတဲံ ဒေါ်စု ..ဘာတွေ ကောင်းတာပဲလုပ်လုပ် အမြဲမှားနေတဲ့ အစိုးရ.)...ကျန်တာတွေဆို သူတို့ခေါင်းထဲ error ပြနေတယ်ထင်တယ်..
Very loaughly. NLD is for country or theirself group.
Myanmar Express အဖွဲ့ဝင်များကို အဖွဲ့ချုပ်မှ အလျှင်အမြန်အလိုရှိနေသည်။
ဘာလုပ်မလို့လဲ ? ဆုငွေ ထုတ်ပါလား ?
Tit for tat, blow for blow ...
Now it is their return of attacking others who are serving the country.
Good, very good, vv good website
ကြံ.ခိုင်ရေးတွေတင် စောက်ပေါမှတ်နေတာ NLD လဲ စောက်ပေါဘဲ။ မရှိဘူးလား NLD IT.
LOL...noobs sia....u cannot search the members like tht .....pro hackers hahaha.......cannot even call IT pros..noob pros...
ဘာလို့ အဲဒီလောက် ပိန်းတဲ့ IT သမားတွေ NLD မှာရှိတာလဲ... ပိန်းချက်က9လောက်ရှိတယ်... ဒီပိုစ့် တင်တဲ့သူကရော မသိဘူးလား ဒီလောက်လေးတောင်... ဂလို trace တိုင်း သိနိုင်မယ်ဆိုရင် မင်းလဲ လစ်နေတာကြာပြီ ဒီမို ငတုံးရဲ့...
NLD ကတော့ သုံးယောက်ပေါင်းမှ ၅ တန်းအောင်တာမှ
မဟုတ်တာ အခြေခံတာကိုက ဆိုက်ကားသမား/အရက်သမား/ဒုစရိုက်သမား/ ခိုးဆိုးနိုက်တွေကို ကာဗာပေးပြီး စုထားတာကိုး
သူများကိုကျတော့ တရားစွဲမယ်တဲ့ သူတိုကျတော့ တရားစွဲလို့မရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတဲ့
NLD အိုင်တီဆိုတာ အိုင်ထဲက တီကောင်တွေကို လိုက်ဖမ်းနေတာလား စောက်ရူး
NLD IT တဲ့ ကွန်ပျူတာကော ကိုင်တတ်ရဲ့လား
ဘုရားမရှိတော့ ကုလားရှိခိုးရ။ မင်းတို့ဘုရားက ကုလားမဟုတ်ဘူးလား။ ကုလားကိုရှိခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ ဦးဗုတ်ဒ မဟုတ်ဘူကွ။ စောက်ကုလား စောက်ဘုရားဖြစ်နေပြီ။
ဒီခေတ်ဒီအခါကြီးမှာ ဒီလိုစောက်ပေါအဖွဲ့တွေရှိသေးတာပဲ .... ဒီလိုကောင်တွေကြောင့် ဒေါ်စုထောင်ထဲမှာ အိုမသေတာကံကောင်းတယ်.... အဆင်မြင့်လိုက်တဲ့ NLD IT အဖွဲ့ကြီး .. မင့်တို့ကို CIA က လေးစားလွန်းလို့ခေါ်သုံးမယ်တဲ့ ..... ကြမ်းတိုက်ဖို့
ပိုစ်ကို အမြန်ပြန်ဖြုတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။ အိုင်တီ နည်းပညာအခြေခံရှိသူတိုင်းရှိတဲ့ IP AdressTrace လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်မှန်သိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အဲ့လို့ Trace လိုဖူးတယ်။ နောက်ဆုံး သူတို့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း လိုက်ကြည့်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ မူရင်း Sever ကိုပဲ ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာနဲ့ပါ။ ဒီပို့ကြီးလာကြည့်တဲ့သူတွေများလာရင် ဒီ Webpage ပိုင်ရှင်အတွက် အထင်အမြင်သေးစရာဖြစ်မှာဆိုလို့ပါ။
trace ချင်တိုင်းtrace ရအောင် Five_O ကလဲ မဟုတ်.. FBI ကလဲ မဟုတ်...အဲ့ လို IT အတွေး မျိုးကို computer basic သင်ပြီးကာစကလေးပဲ ယုံလ်ိမ့် မယ်... ဖြုတ်လိုက်စမ်းပါဗျာ.. ရှက်စရာကြီး...
Thansoe Mawlamyine said...
စောက်ရှက်လေးရှိရှိနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှန်ထဲကြည့်ပြီးဝေဖန်ဦး ဒီမိုမျက်ကန်းတွေ သူများကို သွားပုတ်လေလွင့်ပြောတော့ သိပ်အားရတယ် နင်တို့ အမေ မစ်အဲရစ်ကိုထိမှာ နာနေကြတယ်. ပြည်သူတစ်ယောက်ကဝေဖန်သွားတာနော်.. စစ်တပ်လဲ လီးပဲ အန်အယ်ဒီလဲ စောက်ပတ်ပဲ တစက်မှ စောက်ထင်မကြီးဘူး...
တော်လိုက်တဲ့ it သမားတွေ ရော့ ဆုတော်ငွေငါးကျပ်ယူ
ကိုဘခက်ပြောတာကိုထောက်ခံတယ်ဗျာ ဘာNLDလည်း........အစုလိုက်အပြုံလိုက် အဖွဲ့ကနေတောင်ထွက် ကုန်ကြပြီhe..he he......
မင်းကခွေးမ နဲ့ ခွေးထီးနဲ့ ပေါင်းပြီး
မင်း အ မေ မင်း လိုး လိုက်
ခွေး မွတ် ဆလင် ကောင် နင် က ဘာ ဝင် ဟောင် တာ လဲ။ စောက် ပတ် ကိုး ကွယ် ပြီး လီး ခွန် ခေါင်း ဆောင်း ခွေး မျိုး တွေ ကိုယ့် အ မေ ကိုယ် လိုး တဲ့ မင်း တို့ အလ္လာ ဆို တဲ့ ခွေး က ဘယ် လို ပုံ စံ လဲ ဝက် မျက် နှာ နဲ့ လား ခွေး ကိုယ်နဲ့ လား နွား မြှးီး နဲ့ လား